I-10G SFP + Abavelisi | Kwichina 10G SFP + Umzi mveliso kunye nabaxhasi
I-HUA-NET SFP + ZR Transceiver yenzelwe i-8.5G / 10G Fiber- Channel kunye nokusetyenziswa kwe-10GBE.
I-transceiver inamacandelo amabini: Icandelo lokuhambisa libandakanya i-laser ye-EML ebandayo. Kwaye icandelo lokwamkela liqukethe i-APD photodiode edityaniswe ne-TIA. Zonke iimodyuli ziyanelisa iimfuno zokukhusela i-laser yeklasi. Imisebenzi ye-HUA-NET SFP + ZR yedijithali iyafumaneka kusetyenziswa i-2-wire serial interface, njengoko kucacisiwe kwi-SFF-8472, evumela ukufikelela kwexesha-lokwenyani kwiparameter yokusebenza kwesixhobo njengobushushu be-transceiver, i-laser bias yangoku, amandla e-optical, afunyenweyo amandla ombane kunye nombane wokuhambisa ombane.
10G SFP + CWDM Imodyuli ebonakalayo
HUANET’s I-HUACxx1XL-CDH1 I-CWDM 10Gbps i-SFP + i-transceiver yenzelwe ukuhambisa kunye nokufumana idatha ebonakalayo ngakwindlela enye yefayibha yokujonga ubude bekhonkco le-100km. Le transceiver inamacandelo amabini: Icandelo lokuhambisa libandakanya i-CWDM EML laser. Kwaye icandelo lokwamkela liqukethe i-APD photodiode edityaniswe ne-TIA. Zonke iimodyuli ziyanelisa iimfuno zokukhusela i-laser yeklasi. Imisebenzi yokuqonda isifo yedijithali iyafumaneka kusetyenziswa i-waya yocingo ye-2-wire, njengoko kuchaziwe kwi-SFF-8472, evumela ukufikelela kwexesha-lokwenyani kwiparameter yokusebenza kwesixhobo njengobushushu be-transceiver, i-laser bias yangoku, amandla ombane afumanekayo, amandla ombane kunye namandla ombane we-transceiver .
10G SFP + Dual Fibre Module yemodyuli
I-HUASDxx1XL-C (I) i-D40 yokuPhucula iFom encinci yeZinto ezinokukhutshelwa ze-SFP + zenzelwe ukuba zisetyenziswe kwi-10-Gigabit Ethernet ikhonkco ukuya kuthi ga kwi-40km ngaphezulu kwe-singleMode fiber. Ziyathobelana ne-SFF- 8431, SFF-8432 kunye ne-ITU-T G. 628.1. Uyilo lwe-transceiver lulungiselelwe ukusebenza okuphezulu kunye neendleko ezifanelekileyo ukubonelela abathengi ngezona zisombululo zibalaseleyo zonxibelelwano.
Le transceiver inamacandelo amabini: Icandelo lokuhambisa libandakanya i-laser ye-EML epholileyo. Kwaye icandelo lokwamkela liqukethe i-PIN photodiode edityaniswe ne-TIA. Zonke iimodyuli ziyanelisa iimfuno zokukhusela i-laser yeklasi. Imisebenzi yokuqonda isifo yedijithali iyafumaneka kusetyenziswa i-waya yocingo ye-2-wire, njengoko kuchaziwe kwi-SFF-8472, evumela ukufikelela kwexesha-lokwenyani kwiparameter yokusebenza kwesixhobo njengobushushu be-transceiver, i-laser bias yangoku, amandla ombane afumanekayo, amandla ombane kunye namandla ombane we-transceiver .
Ukudluliselwa kweModyuli yangaphandle, Ixabiso leHuawei Olt, I-Sfp C ++, Umthumeli weXfp, Imodyuli yeFiber Optical, IHuawei Qsfp +,